Nhau - Piston fomu yekukuvara uye chikonzero che hydraulic breaker?
Piston kukuvara fomu uye chikonzero che hydraulic breaker?
1. Mhando huru dzekukuvara kwepiston:
(1) pamusoro kukwenya;
(2) Piston yakatyoka;
(3) Kutsemuka uye kutsemuka kunoitika
2. Ndezvipi zvikonzero zvekukuvara kwepiston?
(1) Iyo hydraulic mafuta haina kuchena
Kana mafuta akasanganiswa nemarara, kana izvi zvisakanaka zvapinda mukaha pakati pepistilita uye humburumbira, zvinozokonzeresa kuti pisitoni rimire. Iko kushushikana kwakaumbwa mune ino kesi kune anotevera maitiro: kazhinji pachave nemaburi ane kudzika kweanopfuura 0.1mm, uye iyo nhamba idiki, uye urefu hwakaenzana zvakaenzana nekurohwa kwepiston. Vatengi vanorayirwa kuti vagare vachiongorora nekutsiva iwo hydraulic mafuta eiyo excavator
(2) Mukaha uripakati pepiston uye humburumbira haunyanye
Iyi mamiriro anowanzoitika kana pisitoni nyowani yatsiviwa. Kana mukaha uri pakati pepistilita uye humburumbira uri mudiki, zviri nyore kukonzeresa kana mukaha uchichinja sezvo tembiricha yemafuta ichikwira panguva yekushanda. Maitiro aro ekutonga ndeaya: kudzika kwekudhonza mucherechedzo hauna kudzika, nzvimbo yacho yakakura, uye kureba kwayo kwakaenzana nekurohwa kwepiston. Zvinokurudzirwa kuti mutengi awane nyanzvi tenzi yekuitsiva, uye mukana wekushivirira unofanirwa kunge uri mukati meakakodzera renji
(3) Iko kuomarara kwepiston uye humburumbira kwakaderera
Iyo pisitoni inoiswa pasi pesimba rekunze panguva yekufamba, uye kuomarara kwepamusoro kwepiston uye humburumbira hwakadzika, izvo zvinokonzeresa kumanikidza. Hunhu hwayo ndehwe: kudzika kwakadzika uye nzvimbo hombe
(4) Lubrication system kutadza
Iyo hydraulic breaker pisitoni lubrication system haina kukwana, iyo pisitoni mhete haina kukwana zvakakwana mafuta, uye hapana inodzivirira mafuta firimu inoumbwa, zvichikonzera kuomarara kupesana, uko kunokonzeresa iyo hydraulic breaker pisitoni mhete kutyora
kana iyo pisitoni yakanganisika, ndokumbirawo kutsiva iyo nepiston nyowani ipapo.